Coral Reef: ဟက်ပီပူးဒေး
Anonymous said on June 9, 2012 at 8:51 PM
Happy Birthday ma ma :)
ဆန္ဒ နဲ့ ဘ၀ ထပ်တူကျနိုင်ပါစေး)
Anonymous said on June 9, 2012 at 9:59 PM
Happy birthday, Ma! Wishing you all the best on the speical day and always! :)
Anonymous said on June 10, 2012 at 5:25 AM
Anonymous said on June 10, 2012 at 2:00 PM
Belated wish for your 33rd birthday!!
nyolaynay said on June 10, 2012 at 2:10 PM
အကောင်တကာ့ အကောင်တွေထဲမှာ မြွေကို အကြောက်ဆုံးကိုယ်က မြွေနင်္ဂါးမလေးနဲ့ တစ်ခန်းတည်း အတူနေလာတာ လေးနှစ်ရှိသွားပြီပဲ :)
တစ်ခါတစ်ခါ ရှူး ကနဲ ဖြစ်တတ်တာလေးကလွဲလို့ မြွေနင်္ဂါးမလေးကတော့ ကြောက်စရာမကောင်းပေါင် :D
Shinlay said on June 10, 2012 at 11:03 PM
ပျော်ရွှင်သောနေ့ ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်သပါစေလို့ မွေးနေ့ မှာ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ညီမ။
sonata-cantata said on June 11, 2012 at 10:21 AM
ဇွန်ရေ.. လိုရာပန်းတိုင်ကို အမြန်ဆုံးရောက်ပါစေလို့ မွေးနေ့ အမှတ်တရ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မြသွေးနီ said on June 11, 2012 at 5:15 PM
ဇွန်မိုးစက် said on June 11, 2012 at 9:18 PM
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးသွားကြတဲ့ ညီမနောင့်၊ အနောနီးမတ်စ်၊ မမွန်၊ ချစ်သူငယ်ချင်းညိုလေး၊ အစ်ရှင်လေး၊ အစ်မသီတာနဲ့ အစ်မမြသွေးနီတို့အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။း)
Nyi Linn Thit said on June 11, 2012 at 9:40 PM
(နောက်ကျခဲ့ပေမယ့်လို့) ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ် ဇွန်ရေ...။
မရည်ရွယ်ဘဲ လုပ်လိုက်မိတဲ့ အကုသိုလ် ခပ်ညစ်ညစ် တွေကို တစ်နှစ်တခါ လဲတဲ့ အရေခွံ အဟောင်းနဲ့အတူ ချန်ထား၊ စွန့်ပစ် နိုင်ပြီး အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့ ညတွေထဲ လရောင်အောက်က လမ်းတွေမှာ တိုးတိတ်၊ ပေါ့ပါးစွာ ရွေ့လျား၊ ဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေနော်...။
ဇွန်မိုးစက် said on June 14, 2012 at 3:27 PM
ကိုညီလင်းရေ... (နောက်ကျခဲ့ပေမယ်) မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။း)
စံပယ်ချို said on June 19, 2012 at 1:25 PM
မိုးခါး said on July 4, 2012 at 4:25 PM
မရောက်ဖြစ်လိုက်တာ မွေးနေ့ကျော်သွားတယ် .. :D ချိတ်ချိုးနဲ့နော်း)
ညီမလည်း မြွေကို စိတ်ဝင်စားတယ် .. အဲ ကြောက်လဲကြောက်တယ် အပြင်မှာ တွေ့ရင်လေ .. မြွေကားကြိုက်တယ် .. မြွေကို အိပ်မက်တတ်တယ် .. အဲလိုမက်ရင် ပိုက်ရတယ် .. မက်ပီးနောက်ရက်ကျ ဘုရားမှာ နွားနို့ကပ်ပီး မေတ္တာပို့ အမျှဝေလို့ အစ်မတွေ သင်ပေးလို့ လုပ်တယ်း)